काले काले मिलेर खाऊँ | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो काले काले मिलेर खाऊँ
यदाकदा सञ्चारमाध्यममा फलाना व्यवसायीले अर्बौँ कर छल्यो वा राजस्व विभागलाई नक्कली बिल पेश गर्यो भन्ने खालका समाचार आउँछन् । न त त्यो समाचारमा थप के भयो भन्ने कुरा आउँछ, न त त्यो समाचार सही थियो वा गलत भनेर अर्कै समाचार लेख्छन् । १ लाख होइन, १ करोड होइन, अर्बौं रुपैयाँ छली भएको कुरामा पनि किन कोही बोल्दैन ? किन कोही लेख्दैन ? समाचार गलत छ भनेर खण्डन पनि कोही गर्दैन । आखिर किन यस्तो हुन्छ होला भनेर गम खाँदै जाँदा निम्न कुराहरु पत्ता लागेका छन् :
पहिलो कुरा त नेपालमा यो सबैलाई थाहा छ, १०-२० हजार तलब खाने सरकारी कर्मचारीले २० करोड पर्ने घर बनाएको हुन्छ । त्यो कसरी हुन्छ, त्यो पनि सबैलाई थाहै छ । त्यस्तै लोटापति भएर शहर छिरेको मान्छे ५-१० वर्षमै कसरी करोडपति, अर्बपति कति हो कति पति बन्न सके त्यो पनि सबैलाई थाहै हुन्छ । हो, यसरी सबैलाई थाहा भइसकेको यति सामान्य कुरा किन लेख्ने, किन बोल्ने भनेर कसैले कुरा नउठाएका रहेछन् ।
दोस्रो, पैसा कमाउनुलाई पनि हिन्दूधर्ममा एक पुरुषार्थ मानिएको छ । त्यसरी पुरुषार्थ त्यसैले गर्न सक्छ जोसँग अरुलाई प्रभावमा पार्न सक्ने ‘गट्स्’ हुन्छ । यसमा कतिपय लोटापति, सरकारी कर्मचारी दक्ष देखिन्छन् । ‘हिङ नभए पनि हिङ हालेको टालो’ बोकेका तथाकथित स्वाभिमानी मानिसहरुले मात्र अरुलाई प्रभावमा पारेर पैसा कमाउने पुरुषार्थ गर्न सक्तैनन् ।तेस्रो, कसैले कर छलेको वा नक्कली बिल बनाएको कुरा सामान्य जनताले थाहा पाउने कुरा भएन । चाहे भने थाहा पाउने भनेका यही दुइ/चार पत्रकार, मानवअधिकारवादी, उपभोक्ता अधिकारवादी, वकिल आदि जस्ता पढेलेखेका केही मानिस नै हुन् ।
तर सञ्चारमाध्यमका लागि यो लेख्ने विषय होइन । किनकी कुनै व्यवसायीले कर छल्यो वा नक्कली बिल बनायो भन्ने लेखेर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम सञ्चारगृहले किन गर्छ ? यो मानवअधिकार हनन नभएको हुनाले मानवअधिकारवादीहरुको पनि विषय होइन । वकिल वा उपभोक्ता अधिकारीवादीहरुको पनि यो विषय रहेन । किनकी कसैले सरकारलाई कर छल्दा उपभोक्ता अधिकार कहाँनेर हनन हुन्छ र ?यो विषय सरकारी अधिकारी वा राजनीतिक दलहरुका प्राथमिकता पर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, त्यसको जबाफ पनि स्पष्ट छ- यो पर्दैन । आखिर यस्तै गतिविधि भइरहे मात्र उनीहरुको पनि आ-आफ्नो धन्दा फस्टाउने न हो । यस्ता कुरा रोक्ने तीर लाग्ने हो भने उनीहरु कसरी बाँच्ने ? सुनिन्छ, अघिल्ला हप्ताहरुमा नक्कली बिल बनाएर अर्बौं राजस्व छल्ने प्रायले भित्रभित्रै कुरो मिलाइसके । उनीहरुलाई सरकारले अब ‘सीआईपी’ घोषणा गर्न बेर छैन ।
हुन पनि हो, कसैले नक्कली बिल बनाएर कर छल्दा न त यसबाट सरकारी कर्मचारीलाई घाटा छ, न त सञ्चारगृहलाई, न उपभोक्ता अधिकारवादी आदिलाई । यस्ता कुरामा सबैलाई फाइदा हुने भएरै होला सायद नेपालमा ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने उखान बनेको । यसरी यो कसैको पनि चासो र हित नभएको कुरामा कोही पनि नबोल्ने, नलेख्ने भनेर ‘काले काले मिलेर खाने’ अघोषित नीति पारित भएको देखिन्छ । कथंकदाचित तपाइंले यस किसिमका प्रकरणबाट फाइदा लिन भ्याउनुभएको छैन भने बेलैमा आफ्नो हिस्सा हात पारिहाल्ने उपाय सोच्दै गर्नु होला है । नत्र पुरुषार्थ गर्न नसकेको भनेर आफ्नै परिवार र समाजको नजरमा गिर्नु होला नि !